The Lives of Others(2006) – Channel Myanmar
IMDB: 8.4/10 308,880 votes
Bastian Trost, Charly Hübner, Hans-Uwe Bauer, Martina Gedeck, Matthias Brenner, Sebastian Koch, Thomas Thieme, Ulrich Mühe, Ulrich Tukur, Volkmar Kleinert
Won 1 Oscar. Another 75 wins & 34 nominations.
ဒီကားက ၂၀၀၇ခုနှစ်ရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲ မှာ Best Foreign language of the year ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်…အခြားဆုပေါင်း ၇၆ဆုရရှိခဲ့ပြီး ၃၅ဆုဆန်ကာတင်စာရင်းလည်းဝင်ခဲ့ပါတယ်…
ဒီဇာတ်​ကားဟာ ဂျာမဏီနိုင်​ငံရဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်​ စစ်​ပြီး​ခေတ်​ အ​ခြေအ​နေကို ရိုက်​ကူးပြထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​ကောင်း​လေး ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင့်​ ​နောက်​ခံ သမိုင်း​ကြောင်းကို အနည်းငယ်​ ​ပြောပြပါမည်​။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်​ပြီးတဲ့ အခါ ဂျာမဏီကို မဟာမိတ်​နိုင်​ငံ​တွေက အသီးသီး ပိုင်းယူခဲ့ကြပါတယ်​။ မဟာမိတ်​​တွေက အထူး​ပြောစရာလိုမယ်​မထင်​ပါ။
ပြင်​သစ်​၊ ဗြိတိန်​၊ အ​မေရိကန်​ နဲ့ ရုရှားတို့ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ သို့​သော်​လည်း တစ်​​ဖြေး​ဖြေးနဲ့ အ​နောက်​ဘက်​က မဟာမိတ်​အုပ်​စု( ပြင်​သစ်​၊ ဗြိတိန်​၊ အ​မေကိကန်​) က
တစ်​ဖက်​ ရုရှားအစိုးရက တစ်​ဖက်​ဖြစ်​ကာ ဂျာမဏီနိုင်​ငံဟာ နှစ်​ပိုင်းပိုင်းခံလိုက်​ရပါတယ်​။ ဂျာမဏီနိုင်​ငံကို နှစ်​ပိုင်း ပိုင်းလိုက်​ရုံသာမက ရုရှားအစိုးရလက်​ထဲကျ​ရောက်​​နေတဲ့
ဘာလင်​မြို့ကိုလည်း နှစ်​ပိုင်းပိုင်း​ခဲ့ပါတယ်​။ အ​ရှေ့ဂျာမဏီနဲ့ အ​နောက်​ဂျာမဏီ အ​ရှေ့ဘာလင်​နဲ့ အ​နောက်​ဘာလင်​ဆိုကာ လူမျိုးတစ်​မျိုးထဲနဲ့ နှစ်​နိုင်​ငံဖြစ်​ခဲ့ရပါတယ်​။
နိုင်​ငံ​ရေးအ​နေနဲ့ အ​ရှေ့ဂျာမဏီဟာ ရုရှားတို့ပိုင်​နက်​နယ်​​မြေထဲမှာ ရှိတဲ့အတွက်​ ဆိုရှယ်​လစ်​စနစ်​ဖြစ်​​ကာ အ​နောက်​ဂျာမဏီက​တော့ ဒီမိုက​ရေစီဆန်​ဆန်​ ဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​။
1961 ခုနှစ်​မှာ ရုရှားအစိုးရဟာ အ​ရှေ့ဂျာမဏီနဲ့ အ​နောက်​ဂျာမဏီကြား ကို ဘာလင်​တံတိုင်းတည်​​ဆောက်​ကာ လုံးဝ ပိုင်းခြားခဲ့ပါတယ်​။ အ​နောက်​ဂျာမဏီကလူများက​တော့
အ​ရှေ့ဂျာမဏီကို အခက်​အခဲမရှိ ကူးသန်းနိုင်​ခဲ့​သော်​လည်း အ​ရှေ့ဂျာမဏီမှ အ​နောက်​ဂျာမဏီသို့ ကူးသန်းခွင့်​သည်​ ထို​ခေတ်​က ​ရွှေထက်​ရှားခဲ့​လေသည်​။
ထို​ခေတ်​ထိုကာလရှိ အနုပညာရှင်​များကိုလည်း အစိုးရက မကြည်​ရင်​မကြည်​သလို အနုပညာလုပ်​ခွင့်​ပိတ်​ပင်​ခြင်းများရှိခဲ့​လေသည်​။
ဤဇာတ်​ကားထဲတွင်​ ပြဇာတ်​စာ​ရေးဆရာတစ်​ဦးဖြစ်​သူ ဂ​ရော့ ဒရိုင်းမန်းကို ဗိုလ်​မှူးကြီး ဗီးစ်​လာက အနီးကပ်​​စောင့်​ကြည့်​ရသည့်​အ​ကြောင်းကို အ​ခြေခံရိုက်​ကူးထားသည်​။
​စောင့်​ကြည့်​ပုံမှာ ဂ​ရော့ ဒရိုင်းမန်း၏ တိုက်​ခန်းတစ်​ခုလုံးကို အသံဖမ်းစက်​များတပ်​ဆင်​ကာဖမ်းယူနား​ထောင်​​နေခြင်းဖြစ်​သည်​။
ဒီကားက အစပိုင်းတော့ အနည်းငယ်အေးပါတယ်…နည်းနည်းသီးခံပြီးကြည့်ပါ…တဖြည်းဖြည်းနဲ့ The lives of others ဆိုတာကို ပြောက်မြောက်စွာပုံဖော်လာသလို ကြည့်ရှုသူကိုလည်း
​။ ဒီဇာတ်​ကားအ​ကြောင်းကို ပြန်​​တွေးတိုင်း ​တွေးတိုင်း ရင်​ထဲမှာ နင့်​​နေ​အောင်​ ခံစားရမယ့်​ ရသတစ်​မျိုးကိုလည်း ​ခံစားရမှာပါ။ ​နောက်​ဆုံးအ​နေနဲ့ အ​သေးစိတ်​​လေး​တွေကို သတိထားကြည့်​ပါလို့​ပြောချင်​ပါတယ်​။ ကဲ ညွှန်းထားတဲ့ အတိုင်း ဟုတ်​လား မဟုတ်​လားဆိုတာ အခုပဲ ကြည့်​ပြီး ဆုံးဖြတ်​ကြပါစို့လားဗျာ။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Nay Chi ပဲဖြစ်ပါတယ်…
File Size : (950 MB) and (383 MB)
Translated by Nay Chi
Encoded by Phyo Pyae
Bastian Trost Charly Hübner Hans-Uwe Bauer Martina Gedeck Matthias Brenner Sebastian Koch Thomas Thieme Ulrich Mühe Ulrich Tukur Volkmar Kleinert
Anabelle D. Munro Bastian Trost Charly Hübner Fabian von Klitzing Gabi Fleming Gitta Schweighöfer Hans-Uwe Bauer Harald Polzin Herbert Knaup Hildegard Schroedter Hinnerk Schönemann Hubertus Hartmann Inga Birkenfeld Jens Wassermann Kai Ivo Baulitz Klaus Münster Ludwig Blochberger Marie Gruber Martin Brambach Martina Gedeck Matthias Brenner Michael Gerber Paul Faßnacht Paul Maximilian Schüller Sebastian Koch Sheri Hagen Susanna Kraus Thomas Arnold Thomas Thieme Ulrich Mühe Ulrich Tukur Volker Michalowski Volkmar Kleinert Werner Daehn
Option 1 drive.google.com 950MB
Option2drive.google.com 383MB
Option3megaup.net 950MB
Option4megaup.net 383MB
Option5openload.co 950MB
Option6openload.co 383MB
Option7ClicknUpload.org 950MB
Option 8 ClicknUpload.org 383MB
Option9streamango.com 950MB
Option 10 streamango.com 383MB
The Bridge on the River Kwai (1957) 1957–
American Gangster(2007) 2007
[+18]Call Boy(2018) 2018
First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (2017) 2017
[18+] Secretary (2002) 2002
Atonement (2007) 2007
Bullet Head (2017) 2017
Wake Up Sid(2009) 2009
Papillon (2018) 2018